China Manufacturer of Led Led Light Led High Bay Light, Switching Power Supply, 240W Ufo High Bay Driver
Description:LED Light Grow Led High Bay Light,Fiarovana herinaratra,240W Ufo High Bay Driver,Ufo Led Driver,,
Home > Products > UFO High Bay miezaka mitondra mpamily > Hiaka-Power High Power Fixtures Driver
Ny vokatra avy amin'ny Hiaka-Power High Power Fixtures Driver , mpanofana manokana avy any Shina, LED Light Grow Led High Bay Light , Fiarovana herinaratra mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny 240W Ufo High Bay Driver R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
8000ma 200W 24-143V mpamatsy hazandrano fitrandrahana harena ankibon'ny tany  Contact Now
Fiarandalamby ho an'ny fiaramanidina avo be.  Contact Now
High Bay UFO Round Type LED Treiber  Contact Now
IP65 Notorahin'ny UFO High Bay Driver 160W  Contact Now
8000ma 200W 24-143V mpamatsy hazandrano fitrandrahana harena ankibon'ny tany
Fonosana: 12PCS / Carton
Zava-nisongadina Fitaovana miasa PFC High efficiency hatramin'ny 93% Asa atao fanombohana , 1-10V na PWM Design for indoor or out door 5 taona an-tariby Mombamomba ny vokatra Product Specs: fanohanana: IP67 MAX herinaratra output:
Fiarandalamby ho an'ny fiaramanidina avo be.
Fonosana: 9PCS / Carton
Ny FD-240U-xx Series dia karazan'ny IP65 tariby mitondra herinaratra milina LED izay natsangana voalohany indrindra ho an'ny jiro LED High & Low ba LED. Ny ariary dia manana rafitra boribory ary voahofana ao anaty alim-boasary mba...
High Bay UFO Round Type LED Treiber
Ny FD-200U-xx Series dia karazan'ny IP65 tariby mitondra herinaratra milina LED izay natao voalohany indrindra ho an'ny baoritra avo sy ambany ambany LED LED. Ny ariary dia manana rafitra boribory ary voahofana ao anaty alim-boasary mba...
IP65 Notorahin'ny UFO High Bay Driver 160W
Ny FD-160U-xx Series dia karazan'ny IP65 tariby mitondra ny tariby mitondra herinaratra izay natao voalohany indrindra ho an'ny baoritra avo sy ambany ambany LED LED. Ny ariary dia manana rafitra boribory ary voahofana ao anaty alim-boasary...
Shina Hiaka-Power High Power Fixtures Driver mpamatsy
Ny hery lehibe 100W na mihoatra, ny fahaiza-manao manohitra ny haavon'ny rano, ny AC100-277V, ny avo lenta PF, dia afaka manao ny fiandrasana fahatakarana na 0-10V / PWM / RX, fiarovan-tena, dia nandalo ny Certificate UL / FCC / TUV / RCM / CB / CE. Eoropa sy Amerika Avaratra.
Ny mpanamory fiaramanidina LED ankehitriny , UL dimmable transformer , Ny famokarana manerantany maneran-tany sy ny fanamafisana isan-karazany, anisan'izany ny CE, UL ary FCC, dia amidy eny amin'ny tsenam-barotra ny vokatra vokarintsika ary entina any amin'ireo tsena iraisam-pirenena, anisan'izany ny Etazonia, Angletera, Frantsa, Alemana, Aostralia, Afrika. , Korea sns manolotra izahay isan-karazany ny jiro LED vahaolana izay ahitana nitondra Linear Lighting na System,, nitondra Lams, jiro LED High helo-drano sns hahabetsaka ny hatsaran-tarehy ny toeram-piasana tsara tarehy miaraka amin'ny Warehouse jiro, jiro mpamily trano fanatobiana entana, atrikasa jiro, fivarotana lehibe Solon-javamaniry fanaovan-jiro sy famokarana.
Fampiharana: indrindra ho an'ny làlam-be ambony, ny mpamatsy herinaratra avo be mihoatra ny 100W, mahazatra ho an'ny ivelany amin'ny rano, tsy azo antoka, AC100-277V, 0-10V / PWM / RX miaro, fiarovan-tory, sokajy 2 satety output, nandalo ny UL / FCC / TUV / RCM / CB / CE voafidy. Eoropa sy Amerika Avaratra.
Fanontaniana 1: Moa ve orinasa iray na orinasa varotra ianao?
Valiny: Fitaovana izahay.
Fanontaniana 2: Fe-potoana?
Valiny: 30% TT fananganana + 70% TT alohan'ny sendipetra, 50% TT deposit + 50% LC balance, Flexible bola
dia azo ifanarahana.
Fanontaniana 3: Inona ny raharahan'ny Fahold?
Valiny: nifantoka tamin'ny mpitantana LED sy ny fandalovan'ny 2010 ny Fahold. Manana engineering 28 isika izay nanokan-tena mba hikaroka sy hampiroboroboana ny rafitra fanaraha-maso LED sy ny dimming.
Fanontaniana 4: Hanao ahoana ny Fahelo raha manana olana isika rehefa mahazo ny vokatrao?
Valiny: Nosavihina mialoha ny entana ny vokatra azonay. Raha vao azonao ny vokatra izay tsy afa-po, azafady mba te hifandray aminay amin'ny fotoana, dia hanao ny tsara indrindra izahay hamaha ny olanao amin'ny fananana serivisy tsara aorian'ny fivarotana.
LED Light Grow Led High Bay Light Fiarovana herinaratra 240W Ufo High Bay Driver Ufo Led Driver 100w Ufo Led High Bay Light